Sesilany ny herisetra ara-nofo: lehilahy 50 taona, tratra nanolan-jaza 6 taona | NewsMada
Sesilany ny herisetra ara-nofo: lehilahy 50 taona, tratra nanolan-jaza 6 taona
Zazavavy vao enin-taona monja ny niharan’ny filan-dratsin’ity lehilahy, antsoina hoe Dadan’i Bam, ity. Tsy afa-niala satria tsy am-pihambahambana nanondroan’ilay zaza ity nahavanon-doza ity. Efa am-pelatanan’ny zandary ny raharaha…
Mpanao trano ny asan’i Dadan’i Bam, voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny fanolanan-jaza vao 6 taona monja tao Antanifotsy, Ambatondrazaka, faritra Alaotra Mangoro, ny talata lasa teo. Voalazan’ny fampitam-baovao avy amin’ny Zandarimaria fa sendra tsy tao an-trano ny renin’ilay zazakely niharam-boina no nanararaotra nanao ny filan-dratsiny ity raim-pianakaviana nahavanon-doza ity izay manao trano mifanila amin’ny tranon’ny ray aman-drenin’ilay zaza ity. Rehefa tonga ilay renim-pianakaviana, nahatsikaritra ra mikoriana amin’ilay zazakely ka taitra tamin’izany izy ary nametraka avy hatrany fitoriana eny amin’ny zandary. Araka ny famotorana fohy nataon’ny zandary, notondroin’ity zaza voaolana ity tsy am-pihambahambana i Dadan’i Bam, nanolana azy. Mitohy ny famotorana, saingy mbola raiki-tahotra tanteraka ilay zaza satria nampitahorin’ilay raim-pianakaviana fa hovonoiny raha mitoroka sy mitantara amin-dreniny. Manaraka fitsaboana ao amin’ny CSB II Ambohimasina ilay zaza niharam-boina.
Naiditra am-ponja koa ireo telo lahy hafa tratra nanolana…
Naiditra am-ponja, afakomaly, ireo telo lahy niampy vehivavy iray voarohirohy tamina raharaha fidarohana sy ny fanolanana tovovavy 17 taona tao Ankadinondry Sakay, nandritra ny fetin’ny Krismasy lasa teo. Nirahin-dreniny ilay niharam-boina ka teny an-dalana hody izy no nisy telo lahy nanakan-dalana azy. Tampoka teo koa, nisy vehivavy iray nidaroka azy, ireo telo lahy kosa, nanolana tambabe azy. Nanokatra avy hatrany fanadihadiana ny zandary taorian’izay hahafantarana ireo tompon’antoka satria tsy nahatsiaro tena nandritra ny andro maro ilay tovovavy ka isan’ny nampanano sarotra ny fanadihadiana. Nandritra ny fanadihadian’ny zandary no nahafantarana fa fitsiriritana ilay tovovavy niharam-boina ny anton’izao daroka niampy fanolanana izao. Voamarina ireo voina nanjo ilay niharam-boina izay tao anaty tsy fahatsiarovan-tena nandritra ny habibiana nataon’izy efatra mianadahy. Nanamafy ny zandary fa mety higadrana mandra-pahafaty ny fanolanana miharo herisetra amin’ny ankizy tsy ampy taona.